Uhlobo lwe-Rihooindustry.Com Ukuveza - I-Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
rihooindustry.com Ukuveza uhlobo
Zonke izinhlobo zokubheja ezisetshenziselwa umshini zingase zihluke, kodwa ukubaluleka kwazo kuyafana, futhi ukuze ugweme ukwehluleka kwesikhathi ngaphambi kwazo zonke izinhlobo zokubheja, kunemithetho efanayo yokugcinwa nokugcinwa kwemithetho okudingeka ihambisane nayo. Ngezansi kwalabo abakhiqizi bebhola ebhodini elijulile ukulifaka.
Okokuqala, ukugcizelela ukuhlanzeka kokuthwala, ngakho-ke izitsha zamathuluzi zomshini ngaphambi kokuhlolwa, kufanele uqale ukuhlanza ubuso bokubamba, bese ususa ukubhekwa kuzo zonke izingxenye. Ngalesi sikhathi ukuze uqaphele, uphawu lwamafutha luyizingxenye ezibuthakathaka kakhulu, ukuhlolisisa nokuqothula ukuze kube ngokucophelela, hhayi amandla amakhulu, ukuze ugweme ukulimala izingxenye.
Elandelwa ukufakelwa kwe-lubrication, kunesidingo esincane sokukhumbula, uma kuthathwa ama-bearings angenisiwe akudingekile ukungeza amafutha amaningi kakhulu. Okokugcina, isidingo sokunaka ukumboza ama-bearings avele, ungavumeli ukubheja kuvezwe ngokuqondile emvelweni noma kumswakama, ukulimala kungonakaliswa. Ngokubheja, indandatho yokubaluleka ibaluleke kakhulu, iyoba nomthelela ngqo ekusebenzeni kokusebenza. Ukuze ugweme ukuthwala futhi ngaleyo ndlela ube nemiphumela emibi, isidingo sokuhlolisisa ngokucophelela izindandatho ezithwalayo ukuqinisekisa ukufaneleka kwemikhiqizo. Ukuhlolwa okudingekayo kudingeke kwenziwe kancane kancane, abakhiqizi abathintekayo bebhola elijulile abalandelayo ukulifaka.
1, ukutholakala kwamasongo okubeletha kudingeka kwenziwe ngaphansi kokukhanya, khona-ke ukubonakala kwamaketanga nokuthwala endaweni yokuhlola ngokucophelela. Njengokutholakala kwemibukiso nokuchoboza, kukhwabanisa lo mcimbi, kuzokwenza ukuthi ukufakelwa kwezindandatho zokubheja kungabuthakathaka, kuphazamise ukujikeleza kokungenelela kwendandatho nokusetshenziswa kokuphila.
2, ukutholakala kokushisa nokushisa, kodwa futhi kuholela ekufakweni kwendandatho yokubamba ingenye yezizathu eziyinhloko ezimbi, okuholela emasongweni abathintekayo aqoshiwe ngqo. Ngesikhathi esifanayo angeke sibe nesinye isikhumba nokukhupha, ngezinga elihlukile kuzosithinta ukugqoka izindandatho nokuwa.
3, kodwa futhi hlola ukufakwa kwekhasi lekhwalithi ye-welding. I-groove ibhola ejulile enezintambo zangaphakathi neyezingaphandle zine-groove ejulile ene-arc, irediyo yesiteshi encane kakhulu kunebhola lebhola. Isetshenziswe kakhulu ukuthwala umthamo we-radial, kodwa futhi ingamelana nomthwalo othile we-axial. Uma ukukhanya kwe-radial yokukhiqiza kwanda, nge-angular contact ball bearing bearing function, ingakwazi ukumelana nomthwalo omkhulu we-axial, kodwa futhi nokujikeleza okukhulu kwejubane. Ukubopha emgodini wegobolondo kanye ne-axis yesixhumanisi esivumelanayo 8 '~ 16', singasasebenza, kodwa kuthinte impilo yayo yesevisi. Uma kwenzeka isivinini esikhulu futhi akufanele sisetshenziswe uma kwenzeka ukufaka amabhethri ebhola kungasetshenziswa ukuthwala uhlobo lokuthwala umthwalo we-axial omsulwa.
Uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo zokubheja zoluhlobo oluthile, i-coofficient ejulile yebhola elibhekene ne-friction coefficient liyingcosana, idlidliza nomsindo nazo ziphansi, umkhawulo ophakeme wejubane, ukucaca okuphezulu, uhlobo olukhethiwe lokukhethwa kokuthwala. Kodwa-ke, lezi zibhebhe ziyaphelelwa amandla futhi azivumelani nokuthwala imithwalo esindayo.
I-deep groove ball bearings isakhiwo esilula, esilula ukuyisebenzisa, iyona ivolumu enkulu yokukhiqiza, iningi kakhulu elisetshenziswe ekilasini lamabherethi. Isetshenziswa kakhulu ezimotweni, imishini yamakhaya, amathuluzi emishini, amabhomu, amaphampu, imishini yokulima, imishini yokugqoka, nezinye izindawo eziningi. Ukukhiqizwa kwalo kubangele okungaphezu kwezingu-70% kokukhishwa kwama-bearings, ukukhiqizwa okuphezulu kakhulu kwe-China, ukusetshenziselwa kakhulu kwezindleko ezishibhile ekilasini lamabherethi.